दरबार हत्याकाण्डको १८ वर्ष : कसले गर्‍यो राजा वीरेन्द्रको वंश नाश? | latestnepali.com
काठमाडौं- राजा वीरेन्द्रको वंश नास हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्ड भएको १८ वर्ष पुगेको छ । नेपालको इतिहासमा कालरात्रिका रूपमा चर्चित दरबार हत्याकाण्ड १८ वर्ष पुग्दा पनि त्यससँग जोडिएका थुप्रै घटनाक्रम ‘रहस्यमय’ नै बनेका छन् ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यलगायत राजपरिवारका १० सदस्यले ज्यान गुमाएको यो कहाली लाग्दो घटनामा कसको हात थियो भन्ने विषय अझै अन्यौलमा छ । तत्काली युवराज दीपेन्द्रले आफ्नै परिवारमा गोलि चलाएको घटनाको अध्ययन गर्न बनेको तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको २ सदस्यीय टोलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको निश्कर्ष भए पनि आम नेपाली जनता दीपेन्द्रले घटना घटाएको भन्ने विषय पत्याउँदैनन् । त्यसैले पनि यो घटना अझै रहस्यमय बन्दै गएको छ ।
समाजमा हत्याकाण्डका जुनसुकै घटना घटेपनि आम सर्वसाधारणले पीडितले न्याय पाउने विषयलाई दरबार हत्याकाण्डसँगै जोड्ने गरेका छन् । राजाको परिवारले न्याय नपाएको देश भन्ने टिक्का टिप्पणीले सामाजिक सञ्जालमा स्थान पाउने गरेको छ । अहिले पनि धेरैको माग दरबार हत्याकाण्डबारे निष्पक्ष छानविन होस भन्ने नै छ ।
दरबार हत्याकाण्डको प्रशंग जोडिएर धेरै पुस्तक प्रकाशन भएपनि त्यहाँ पनि अनुमानकै कुराबाहेक अन्य तथ्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यदी दीपेन्द्रले नै गोली चलाएको भए कस्को उक्साहटमा परिवार सखाव हुनेगरी गोली प्रहार गरे । दीपेन्द्रको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो थियो ? फायरिङ चल्दा त्यहाँ उपस्थित अङ्गरक्षक सैनिकहरूले किन नियन्त्रणको प्रयास गरेनन् ? दीपेन्द्रले आत्महत्या गरेकै हुन् त ? लगायतका जिज्ञाशाको उत्तर अझै आउन सकेको छैन ।
घटना भएको स्थल त्रिभुवन सदनलाई २०६१ सालमा भत्काइको छ । हत्याकाण्डमा प्रयोग भएको हतियार भने नेपाली सेनासँग सुरक्षित छ । दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी पुस्तक लेखेका इतिहासविद् प्रा.डा. राजकुमार पोखरेलले घटनास्थल नष्ट गर्नुलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
२०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रबार राति सवा नौ बजे घटना भएको थियो । घटनामा परेका मृतक तथा घाइते राजपरिवारका सदस्यलाई छाउनी अस्पतालसम्म लगिएको थियो । दरबार हत्याकाण्डपछि राजा घोषणा भएका युवराज दीपेन्द्रको पनि हत्याकाण्डको तेस्रो दिन मृत घोषणा गरिएको थियो ।
डि आर अटुको संगीत र जिविहाङ राई र किशु गुरुङको सुमधुर आवाजमा रहेको पुर्वेली गीत”सोल्टिनी ज्यु “सार्वजनिक